सडक दुर्घटनामा पत्रकार शर्माको मृत्यु | Nagarik News - Nepal Republic Media
काठमाडाैं- ललितपुरको धोबीघाटमा भएको सडक दुर्घटनामा तत्कालीन प्रेस सेन्टर काठमाडौँका अध्यक्ष गोविन्द शर्माको मृत्यु भएको छ। उनीसँगै मोटरसाइकल चालक चन्द्रमणि मुडभरीको पनि मृत्यु भएको छ।
आइतबार दिउँसो साढे ३ बजे स्कोरपियो र मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सातदोबाटोतर्फबाट बल्खु आउँदै गरेको स्कोरपियो र विपरीत दिशाबाट आएको मोटरसाइकल आपसमा ठोकिएका महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग सानेपाका प्रमुख (प्रहरी नायब निरीक्षक) हरिसिंह धामीले बताए।
उनका अनुसार मोटरसाइकल चालक मुडभरी र पछाडि बसेका शर्मा दुवैको टाउकामा चोट लागेको थियो। घाइते दुवैलाई पहिले मेघा अस्पताल लगिएको र अस्पतालले रिफर गरेर नर्भिक अस्पताल पठाएको उनले बताए। धामीले भने, “नर्भिक अस्पताल पुगेको केही समयमा उहाँहरुको मृत्यु भएको थियोे।” स्कोरपियोका चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रभागले जनाएको छ। रासस
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७६ २२:०५ आइतबार
दुर्घटना धोबीघाट गोविन्द_शर्मा प्रेस_सेन्टर_काठमाडौँ अध्यक्ष
मादक पदार्थ सेवन गरेर विवाद हुँदा इटहरीमा युवकको हत्या
मादक पदार्थ सेवन गरेर विवाद हुँदा आइतबार राति इटहरी वडा नं. २० तरहरामा एक युवकको हत्या भएको छ। विवाद हुँदा इटहरी वडा नं. २० का २८ वर्षे राजन राईको हत्या भएको हो।
विपन्न तथा दलित परिवारलाई बाख्रा वितरण
आर्थिक विपन्न तथा दलित परिवारलाई बोका बाख्रा वितरण गरिएको छ। मुड्केचुला गाउँपालिका ४ इलगाउँका आर्थिक विपन्न र दलित परिवारका ४० जनालार्ई ३ बाख्रा १ बोकाका दरले १ सय ६० ओटा बोकाबाख्रा वितरण गरिएको हो।
जीवन र जीविकाको अन्तर्द्धन्द्व: लकडाउन
संक्रामक रोग कोभिड–१९ को फैलावट रोक्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन सोमबार ७० दिन पुग्दैछ। सरकारले शनिबार गरेको निर्णयअनुसार लकडाउनले जेठ ३२ सम्म निरन्तरता पाएको छ।